Global Voices teny Malagasy » Kamerona: Ireo mpamorona sy mpanamboatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Janoary 2011 13:11 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Kamerona, Hevitra, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
Nampahita anay ny asan'ireo mpanao taozavatra sy mpamorona Kameroney ny lahatsoratra iray tao amin'ny bilaogy AfriGadget  avy amin'ny alalan'ireo horonantsary nalain'i Bill Zimmerman ao amin'ny 27 months , bilaogy iray manadihady ny “Kamerona avy amin'ny fijerin'ny mpahay teknolojia”.
Fivondronan'olona mpanefy vy  nalain'i Bill Zimmerman  CC/By-NC-SA 
Ny vondrona mpanao taozavatra voalohany ho hitantsika dia ireo mpanefy vy tantarain'i Mr. Zimmerman ao amin'ny The Extraordinary Makers of Maroua . Manempo vy efa tsy ilaina intsony izy ireo havadiny ho zavatra ilaina afaka amidin'izy ireo ambanin'ny vidin'ny fanafarana ireo fitaovana nafarana avy any ivelany. Tsy vitan'ny hoe mandika ampahany izy ireo, fa mbola manova sy manatsara ny endriny, na dia izy ireo ihany aza no manamboatra ny fitaovany: jereo ohatra ireo taforona vita avy amina kodiarana bisikileta ao amin'ny voalohany amin'ireo horonantsary 3.
Lehilahy amam-polony maro manana fahaizana amin'izany no nivory eto ho amina tanjona iray: hamadihana ireo fatim-by ho fitaovana madinika vita fatana, kojakoja fanolo sy fitaovana enti-miasa ilaina ho amidy amin'ny olona ao an-toerana. Ireo mpianatra taozavatra dia mianatra izany amin'ny fampiasana ny taforona na amin'ny famolavolana hazo ho an'ny tahon'ireo fitaovana. Ireo zava-bita eto dia novolavolaina tamin'ny tanana tanteraka ary amina faritra izay tsy maintsy hita izay vao tena tiana.
Iray hafa  amin'ireo horonantsarin'i Mr. Zimmerman dia nalaina nandritra ny Fampirantiana fambolena sy fiompiana 2009 tany Limbe, SW Kamerona. Ao anatin'izany, mampiseho ny zava-bitany ny mpanao taozavatra iray, fampikotrehana atody amin'ny vidiny mora:
Mbola ao amin'ity Fampirantiana fambolena sy fiompiana ity ihany dia variana tamina mpanao taozavatra iray hafa  indray izy:
Anivon'ny fampirantiana rehetra, nisy lehilahy iray niavaka tamin'ireo zava-bitany sasany izay voasoritra amin'ny fivadian'ny endrika, anjara asa, zava-maitso sy fanangolena tanteraka amin'ny bararata lavorary. Lekuama Ketuafor no tompon'ny Bamboo Magic, orinasan'olontsotra izay nataony ho fanampim-pampidiram-bolany maha-mpampianatra azy.
Ao amin'ity horonantsary manaraka ity  dia mahita ity artista ity mitafy bararata ka hatrany ambony hatrany ambany mampiseho roa amin'ireo zava-bitany: ny fasiana finday sy fasiana solosaina finday (laptop) ihany koa dia vita avy amin'ity ahitra miendrika hazo ity.
Afaka mamaky bebe kokoa mikasika izany sy ireo mpitantana Kameroniana hafa ao amin'ny bilaogin'i Bill Zimmerman 27 months  ianao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/01/24/12176/
 Iray hafa: http://www.youtube.com/watch?v=ufmBl523_YM
 mpanao taozavatra iray hafa: http://www.27months.com/2009/12/bamboo-magic-mobile-phone-laptop-case/
 horonantsary manaraka ity: http://www.youtube.com/watch?v=zzoaCmVGiPs